၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အာလူးများကိုသတ်ခြင်း - ရွေးစရာကားအဘယ်နည်း။ - Potatoes News
Potato.news app ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အာလူးကိုလူသတ်မှုဖြင့်သတ်ဖြတ်ခြင်း - ဘာရွေးစရာလဲ။
In အာလူးအစေ့, လူသတ်မှုဇူလိုင်လတွင်စတင်ခဲ့သည်။ အာလူးများကိုဓာတုဗေဒသုတ်သင်ခြင်းကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းအတွက် Reglone နှင့် Finale ကိုခွင့်မပြုတော့ပါ။ စက်ရုံကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်မှတဆင့်စိုက်ပျိုးလယ်ယာကဏ္ Organization အဖွဲ့မှရန်ပုံငွေဖြင့် Delphy သည် 2019 နှင့် 2020 တွင်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုသုတေသနပြုခဲ့သည်။
နှစ်နှစ်ကြာသုတေသနပြီးနောက်၊ အလေ့အကျင့်သည်လက်ရှိဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုဗဟုသုတများစွာဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်လိုအပ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အပြည့်အဝဆေးကုသမှုများဖြင့်သာနှေးကွေးသည်။
aphids မှမှန်ကန်သောအရွယ်အစားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေခြင်းအပြင်သစ်ရွက်များသေစေခြင်းဖြင့်ဥ၏ဥများ Erwinia နှင့် Phoma ကဲ့သို့သောဘက်တီးရီးယားရောဂါများကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုကန့်သတ်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
Quickdown နှင့် Spotlight Plus တို့ဖြင့်သမရိုးကျပက်ဖြန်းစက်များဖြင့်ပက်ဖြန်းသည့်အချိန်ဇယားနှင့် Emmeloord ရှိစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်လေနှင့်အတူ WingsSprayer သည်မှုန်ရေမွှားပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ပက်ဖြန်းစဉ်အတွင်းအခြေအနေများသည်အနိမ့် RH နှင့်အတူနွေးခဲ့ကြသည်။ ဤအခြေအနေများတွင်မြင့်မားသောရေမှုန်ရေမွှားပမာဏသည်အနိမ့်မှုန်ရေမွှားပမာဏထက် ပို၍ ရှင်းလင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၃၈၅ လီတာ / ဟက်တာမှာလုံလောက်ပြီး ၂၁၅ လီတာ / ဟက်တာအလွန်နည်းသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်ပင်မ dieback အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည်။ အဆိုပါမဂ္ဂဇင်းလည်းတုန့်ပြန်။ အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးပမာဏကို သတ်မှတ်၍ မရပါ။ ပက်ဖြန်းအချိန်ဇယားတွင် Spotlight နှင့် Quickdown တို့၏အမိန့်သည်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ Quickdown နှစ်ခုနှင့် Spotlight နှစ်ခုပါသောရေမှုန်ရေမွှားများအလုံအလောက်ကောင်းစွာမအလုပ်လုပ်လျှင် Affinity Plus နှင့်အခြားရေမှုန်ရေမွှားတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။
လေ့လာမှုတွင်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုရပ်တန့်ရန်ခေါက်မလုပ်မီစက်မှုပစ္စည်းများပေါ်တွင်ပက်ဖြန်းခြင်းမရှိပါ။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအရာဝတ္ထုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုပိုမိုမြင်သာစေသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယား ၂ တွင်ကွဲပြားမှုများသည်သြဂုတ်လ ၆ ရက် (ပထမကုသမှုပြီးနောက်ရှစ်ရက်အကြာ) တွင်ကြီးမားကြောင်းတွေ့ရပြီးသြဂုတ်လ ၁၇ ရက် (နောက်ဆုံးကုသမှုပြီးနောက်ဆယ်ရက်) မှာကျဆင်းသွားပြီဖြစ်သည်။ ထိုးနှက်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပက်ဖြန်းသည့် Spotlight (လိမ္မော်ရောင်လိုင်း) သည်အဆင်သင့်အနေအထားကြောင့်အမြန်ဆုံးအလုပ်လုပ်သည်။ အခြားအရာဝတ္ထုများ၏လိုင်းများနီးပါးတိုက်ဆိုင်။
ကောက်ပဲသီးနှံများကိုရပ်တန့်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးပက်ဖြန်းပြီးသောအခါသစ်ရွက်ကိုဆွဲယူခြင်းကပိုကောင်းသည်။ ဒုတိယနေရာတွင်တွန်းကန်ခြင်းနှင့်တတိယနေရာတွင် full-field spray လုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Full-field spray သည်သုံးမီတာတိုင်းတွင်မြေအားသိပ်သည်းခြင်းမရှိခြင်းနှင့်ကုန်းမြင့်မြင့်များအကြားရှိရေအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်သည့်အားသာချက်ရှိနိုင်သည်။ သူ့ဟာသူ haulm ခတ်သည် full-field ပက်ဖြန်းခြင်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ Haulm ခတ်ခြင်းကို Spotlight ပက်ဖြန်းခြင်းနှင့် Haulm-Does နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် full-field spray သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်။
Quickdown သို့မဟုတ် Spotlight Plus ဖြင့်စတင်ပါ။
အခြေအနေများမှမှုန်ရေမွှားအသံအတိုးအကျယ် Adjust ။ အနိမ့် RH နှင့်ရေမှုန်ရေမွှားမျက်ရည်များလျင်မြန်စွာအငွေ့ပျံမှာအနည်းဆုံး 400 လီတာ / ဟက်တာပမာဏလိုအပ်သည်။
ကောင်းမွန်သောစားသုံးမှုကိုသေချာစေရန်၊ မိုးရာသီနှင့်မိုးအုံ့ရာသီတွင်မျိုးစေ့အာလူးကိုညနေပိုင်းတွင်ဖျန်းနိုင်သည်။ နွေရာသီတွင်ရှည်လျားသောမိုးလေ ၀ သများကြောင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုကောင်းမွန်လိမ့်မည်။
လိုအပ်ပါက Affinity Plus နှင့်စတုတ္ထရေမှုန်ရေမွှားကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရေမှုန်ရေမွှားတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုဖြင့်ပေါင်းခြင်းသို့မဟုတ်နောက်သို့လိုက်ခြင်း
Loof-Does နှင့် haulm flaps ပေါင်းစပ်မှုဖြင့်ရလဒ်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။ အနိမ့်မှုန်ရေမွှားအသံအနိမ့် RH မှာအဘယ်သူမျှမပြproblemနာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်သင့်အနေအထားတွင် Spotlight Plus သို့မဟုတ် Quickdown ဆေးများကို ၂၅ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချနိုင်သည်။
ဇူလိုင်လ ၈ ရက် Swifterbant ရှိမျိုးစေ့အာလူးစိုက်ခင်းတွင်သုတေသနရလဒ်များအားထပ်မံရှင်းပြပြီး Delphy အကြံပေးများတက်ရောက်လိမ့်မည်။ Corona ကြောင့်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည် .
2021 ခုနှစ်တွင် aardappelen အတွက် Loofdoding: Wat zijn de opties?
Tags: သီးနှံကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန်ကြီးထွားလာသောအစေ့များအာလူးအစေ့ကဏ္ sectorမျိုးစေ့အာလူးနည်းပညာ
Maleic hydrazide (MH) အတွက်အချိန်လား။
ပြန်လည်ပြုပြင်ခွင့် - ရောင်းဝယ်သူများနှင့်လယ်သမားများသည်မူဝါဒဟန်ချက်ညီရန်ကြိုးစားသည်